Wararka - Noocyada awoodda dabaysha
In kasta oo ay jiraan noocyo badan oo marawaxadaha dabaysha ah, haddana waxaa lagu soo koobi karaa laba qaybood: marawaxadaha dabaysha ee jiifka, halkaas oo wareegga wareegga wareegga dabayshu uu la mid yahay jihada dabaysha; marawaxadaha dabaysha dhidibka taagan, halkaas oo dhidibka wareegga wareegga wareegga wareegga uu ku toosan yahay dhulka ama jihada socodka hawada.
1. Marawaxadaha dabaysha dhidibka
Marawaxadaha dabaysha dhidibka ah ayaa loo qaybiyaa laba nooc: nooca wiishka iyo nooca jiididda. Nooca wiishka ee marawaxadaha dabaysha ayaa si dhakhso leh u wareegaya, nooca caabbintu si tartiib tartiib ah ayuu u rogmadaa. Soo saarista tamarta dabaysha, matoorka dabaysha ee nooca wiishka jiifka ah ayaa badanaa la isticmaalaa. Inta badan marawaxadaha dabaysha dhidibka ayaa leh aalado kahortaga dabaysha, kuwaas oo ku wareegi kara jihada dabaysha. Marawaxadaha dabaysha yaryar, qalabkan dabayshu u jeeddo wuxuu adeegsadaa daboolka dabada, halka marawaxadaha dabaysha waaweyn, farsamo gudbinta oo ka kooban walxaha dareemayaasha jihada dabaysha iyo matoorrada adeegga.
Marawaxadaha dabaysha ee giraangirta dabaysha taallo hor taal waxaa loo yaqaan marawaxadda dabaysha dambe, iyo marawaxadda dabaysha oo wadata giraanta dabaysha ka dambeysa munaaradda waxay noqoneysaa marawaxadaha dabaysha hoose. Waxaa jira qaabab badan oo matoorrada dabaysha jiifka-dhidibka ah, qaarkood waxay leeyihiin giraangiraha dabaysha oo leh aalado la rogo, qaarna waxaa lagu qalabeeyaa taayirro badan oo dabayl ah oo ku yaal taawar si loo yareeyo kharashka munaaradda iyadoo la raacayo xaaladda xoog wax soo saar gaar ah. Mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka ayaa wuxuu abuuraa hawo wareega hareeraha dabaysha, wuxuu uruuriyaa qulqulka hawada, wuxuuna kordhiyaa xawaaraha socodka hawada.
2. Marawaxadaha dabaysha taagan
Marawaxadda hawo ee taagan ma u baahan tahay inay wajahdo dabaysha markay jihada dabayshu is bedesho. Marka la barbardhigo marawaxada dabaysha dhidibka, waa faa'iido weyn marka la eego tan. Kaliya ma fududeyneyso qaabeynta qaabdhismeedka, laakiin waxay kaloo yareyneysaa awoodda gyro-ga marka dabaysha dabayshu u jeeddo dabaysha.
Waxaa jira dhowr nooc oo matoorrada dabaysha-dhidibka taagan oo isticmaala iska caabbinta si ay u rogto. Dhexdooda, waxaa jira giraangiraha dabaysha oo ka samaysan saxanno fidsan iyo xarkaha, kuwaas oo ah aalado iska caabin ah oo saafi ah; Mashiinka dabaylaha nooca S-ga ah waxay leeyihiin wiish qayb ahaan ah, laakiin badanaa waa aalado iska caabin ah. Qalabyadani waxay leeyihiin koronto bilow ah oo ballaadhan, laakiin saamiga xawaaraha caaradu hooseyso, waxayna siisaa wax soo saar koronto oo hooseeya iyadoo ay ku xiran tahay xaalad cabbir gaar ah, culeys, iyo kharashka giraangirta dabaysha.
Waqtiga boostada: Mar-06-2021